कुवेतबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली चेलीको आशुले लेखेको चिट्ठी : भोकै भएपनि आफ्नै देशमा म*र्न चाहन्छु – Butwal Sandesh
कुवेतबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली चेलीको आशुले लेखेको चिट्ठी : भोकै भएपनि आफ्नै देशमा म*र्न चाहन्छु
तपाईंलाई थाहै छ, हामी भाग्यमानी देशका अभागी नेपाली हौँ। स्वर्गजस्तो देशमा जन्मिएर एक छाक टार्न परदेशको ढोका चहार्न बाध्य छौँ। पाएसम्म त आफ्नै देशमा पसिना बगाउँछौं। तर बाध्यता छ‚ त्यो तपाईंले पनि बुझेकै कुरा हो। परिवारसँगै हाँसिखुसी बस्छु भन्ने रहर कसलाई नहुँदो हो र? तर रहरभन्दा विवशता ड´रलाग्दो हुने रहेछ। कामका लागि रात दिन भौतारिँदा पनि केही उपाय नलागेपछि म परदेशको बाटो रोज्न विवश भएँ।
३ वर्ष परदेश भोगेको मन स-साना छोराछोरी र वृद्ध भएका श्रीमानसँग देशमै बसौँ भनिरहेको थियो। फेरि पनि देशमै केही गर्छु भनेर काम खोजेँ। ५ महिना बिते। तर अहँ केही काम पाइनँ। म जस्ताले देशमा काम नपाउने रहेछौं। छोराछोरीको भविष्य र छाक टार्नकै लागि फेरि परदेश जाने सोच बनाएँ। तर सरकारले परदेशको बाटो पनि बन्द गरिदिएको रहेछ। खबर सुनियो, ‘अब श्रम स्वीकृति लिएर घरको काममा जान मिल्दैन रे।’
म अलमलमा परेँ। न देशमा काम छ। न परदेश जाने बाटो छ। म के गरौँ प्रधानमन्त्रीज्यू? म के गरौँ? तपाईं त्यो ठाउँमा आफूलाई राखेर सोच्नुस्। कुवेतको बन्द कोठाबाट अ´श्रुधारा मिसिएको यो चिठीमा म एउटा प्रश्न तपाईंलाई गर्न चाहान्छु। यदि तपाईंलाई यस्तै समस्या परेको भए के गर्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री ज्यू? मैले चाहीँ त्यो बेला ज्या नको बाजी थापिदिएँ। म´र्नै परे आफ्नै परिवार र छोराछोरीकै लागि मरियोस् न बरु भनेर भारतको अवै´ध बाटो हुँदै म कुवेत हानिएँ।
अहिले समग्र विश्व कोरोना भाइरसका कारण आ´क्रान्त छ। कोरोनाको चपेटामा परेको विश्वसामु निरीह भएर म विगत २ महिनादेखि कुवेतको बन्द कोठामा छु। कोठाको मासिक भाडा २० हजार छ। साथीहरु मिलेर बसेका थियौँ र भाडा तिरेका थियौँ। अहिले त न काम छ‚ न साथीहरु। फिलिपिनो साथीहरुलाई त्यहाँको सरकारले उद्धार गरेर लगिसक्यो। भारतीय साथीहरुलाई पनि १२ अप्रिलमा भारतले उद्धार गरेर लैजाँदैछ।
त्यसपछि म एक्लैले कोठाभाडा कसरी तिर्ने? घर मालिकले कोठाबाट निकालेपछि म कहाँ जाने? कुवेत सरकारले घर भाडा नलिनु त भनेको छ तर घरधनीले कम्पनीमा काम गर्नेलाई पो फ्रि भनेको तिमीहरुलाई होइन भनेको छ। दुई महिनादेखि हरेक रातहरु भोक र त्रा सबीच बितिरहेका छन्। कोरोनाले भन्दा पनि भोकले म र्ने दिन आएको छ। दश नंग्रा खियाएर खाने मान्छे‚ अहिले भोक मेटाउनकै लागि माग्न बाध्य छु। कोही मनकारी मान्छेले दिए भने भोक टर्छ। कहिलेकाँही आँशु पिएर पनि अघाएकी छु।
देश लकडाउन छ। बन्द कोठामा आँशु पिएर जीन्दगीको हिसाब गरिरहेकी छु। कहिले काँही त लाग्छ यस्तै हो भने आफ्नो माटो टेकेर छोराछोरीका साथ म र्न पाउँदिन होला। छोराछोरीले मेरो मुख नदेखी परदेशमै म र्छु होला।
अब म कहाँ जाने?, पीडा कोसँग पोख्ने? सारा नेपालीको अभिभावक ठानेर म आज तपाईंलाई पत्र लेखिरहेकी छु। प्रधानमन्त्रीज्यू कि यो आपतकालीन अवस्थाभरी श्वास अल्झाउने व्यवस्था गरिदिनुस्, होइन भने देश फर्किने बाटो खुल्ला गरिदिनुस्।
परदेशमा भोकभोकै म र्नुभन्दा बरु आफ्नै माटोमा भोकै म र्न चाहन्छु।